A CHỤRỤ DAỤRA MAKA ỊKPARỊ OSINBAJỌ – hoo!haa!!
Eziokwu apụtala ihe maka ihe mere e jiri chụọ Alahaji Lawal Daụra bụbu Ụlọọrụ nchekwa nzuzo Naịjiriya a kpọrọ Department of State Security (DSS) ụnyahụ.
Onye nọgodu n’ọkwa ka Onyeisiala, Ọkammụta Yemi Osinbajọ kpọrọ ọgbakọ ndi ọrụ nchekwa iji kpaa banyere mwakpo ndi ọrụ DSS wakporo Ụlọ Nzuko Omebeiwu Ala Naịjiriya n’ụtụtụ ụnyahụ n’udi na-ebutere Naịjiriya ajọ aha. Mba Amerịka na Britenụ na-achakwa ndi isi ọchịchị Naịjiriya ọkụ ka ha ghara ileghara mpụ ahụ anya.
Site n’ozi hoo!haa!! nwetara, Alahaji Daụra bụ onye na-ahụta onwe ya dịka “aka akpa n’isi” jiri mba bachie Osinbajọ ntị mgbe ọ jụrụ ya ihe tinyere ya na ya bụ ajọ akparamagwa nke buteworo Gọọmentị Naịjiriya oke mkparị.
Osinbajọ, onye nke iwe koro afọ foro ntụtụ taa na ọ bụrụ na Daụra alaghị, yanwa alaa ozigbo.
O kwukwara na Daụra alaghị,nkwekọrịta ndi otu APC gara ịghasa ụbọchị ahụ.
Buharị kwetara n’agbanyeghị na o sighi ya n’obi maka na Osinbajọ ịgba alụkwaghịm ebe ọtụtụ ndi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha ka gbapụchara agbapụ ga-eme ka olileanya ya ịlaghachị azụ n’afọ ọzọ kpụọ afọ n’ala.
Akpọlitewo Mazị Matiu Seiyefa dịka onye nọgodu ka Onyeisi ndi DSS.
Previous Post: NA STEETI DELTA, AMALA MMADỤ ABỤỌ IKPE ỌNWỤ
Next Post: AMAMIHE/AGHỤGHỌ